Isinqumo ngekusasa likaKhune | News24
Isinqumo ngekusasa likaKhune
Johannesburg – Kulindele ukuthi kuphume isinqumo ngekusasa likanozinti weBafana Bafana ongena qembu u-Itumeleng Khune kuleli sonto ngokusho kombiko.
U-Itu uchithe amasonto ahlule ezilolonga nomfowabo uLucky eNike Centre eSoweto njengoba efuna ukuhlale esesimweni sokulungela ukudlala ngaphambi kokumemezela iqembu azogijima kulona ngesizini ka-2015/16.
Umthombo weSoccerLaduma osondelene nalo mdlali uthe noma kanjani kuleli sonto kuzocaca ngekusasa likaKhune njengoba isizini ivulwa ngesonto elizayo.
Umthombo uthe imanenja yalo mdlali isebenza kanzima ukuqinisekisa ukuthi lo nozinti oyintandokazi uyalithola iqembu azogijima kulona ngokushesha.
OLUNYE UDABA:OweBucs ukhale ngamathuba kunqoba ezakhe
“Sengikhulumile nomunye wabantu abasebenzisana noKhune uyathembisa ukuthi ukuthi nankanjani leli sonto lizophela esesayinile neqembu elithile.
Akukacaci noma uzobuyela kwiKaizer Chiefs noma uzodlala kwelinye iqembu kodwa enginesiqiniseko kwakho ukuthi konke kuzophothulwa kuleli sonto,” kusho umthombo.
Kubikwa ukuthi maningi amathuba okuthi lo mdlali abuyele kwiChiefs kodwa iSiya Crew idalula ukuthi konke kusezandleni zakhe njengoba ekhona namanye amaqembu amgaqele.